फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै « sarbapriyanews.com
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७८, बिहीबार २०:४६
चितवन । सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेका केपी शर्मा ओली फेरि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने लगभग पक्का भएको छ । विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतिय सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिइकी थिइन् । तीन दिनको समय लगभग सकिँदै लाग्दा विपक्षी दलहरुले बहुमत संख्या पुर्याउन सम्भावना कम हुँदै गएपछि फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने देखिएको हो ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अ‍ोलीको विकल्पमा नयाँ सरकार गठनकालागि निर्णय गरेरै अगाडी बढेपनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको साथ नपाएपछि संख्या नपुग्ने भएको हो । यद्यपी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले भने कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बताएका थिए ।
सिंगो जसपाले साथ नदिने भएपछि एमालेको असन्तुष्ट समूहसँग विपक्षी दलले कुराकानी तीव्र पारेपनि अन्तिम समयमा त्यो सम्भावना पनि टरेको छ । बिहीबार अध्यक्ष अ‍ोली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच ४ घण्टा लामो छलफल सहमतिउन्मुख भएपछि नेपाल समूहले तत्काल राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ । अब जसपा र नेपाल पक्षको साथ नहुने भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संख्या पुग्दैन । जसका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छिन् ।
#केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री
अझ खुकुलो पार्दै काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्ने तयारी
आज पनि मुलुकभर ‘भारी’ वर्षाको सम्भावना कायमै, सतर्क रहन आग्रह
आज नेपालका थप २,४०१ जनामा कोरोना संक्रमण, ३४ जनाको मृत्यु
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा ?
आज चार प्रदेशमा ‘भारी’ वर्षाको सम्भावना, बाढी पहिरोबाट जोगिन अनुरोध
प्रदेश १को बजेटः कर्मचारीलाई प्रतिदिन १०० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने…
मनसुन सक्रिय, बुधबारसम्म ‘भारी’ वर्षाको सम्भावना
काठमाडौंको यी स्थानमा आज र भोलि भेरोसेल खोप दिइदै
थपिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाईन्छ, के पाईंदैन ? यस्तो छ…